Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Jordan Pickford Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Picky". Ụmụaka anyị bụ Jordan Pickford Akụkọ gbasara akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amaghị ihe banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ịrị elu ya na-achịkwa dịka onye nlekọta mgbakọ mbụ nke England ma ọ bụ mmadụ ole na ole tụlee akwụkwọ akụkọ anyị Jordan Pickford bụ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a n'enweghi adieu ọzọ, ka anyi bido.
Jordan Pickford Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị agbanwe agbanwe -Ndụ mbido
A mụrụ Lee Leeford Pickford na 7th nke March 1994 na Washington, United Kingdom. A mụrụ ya nne ya, bụ Sue Pickford (onye na-elekọta ụlọ) na nna ya Lee Pickford (onye na-ewu ụlọ).
Akụkọ banyere onye nkwụsịrị a mụrụ na Washington kwuru banyere ịrị elu ya dị ka onye na-eto eto na nke asatọ, n'ụzọ niile gafere n'ogo nke mbụ na nke ọzọ.
N'ịbụ onye tolitere, Pickford gara St Robert nke Newminster Catholic School. N'ụlọ akwụkwọ, ọ nwere mmasị n'ịgba bọl, karịsịa ịbụ onye na-eche nche n'ihi na ọ bụ onye kasịsị elu n'etiti ndị 8 afọ niile ndị nabatara maka ịdị elu ha. Mgbe o kwusịrị ọnọdụ ịgba chaa chaa maka ìgwè ndị ntorobịa ụlọ akwụkwọ ya, nne na nna ya kpebiri idebanye aha na mahadum Sunderland mgbe ọ ka dị afọ 8.
"Mgbe ị na-ele anya na ndị dị afọ asatọ ka ị na-enyocha ịdị elu ha. Ị ga-achọpụtakwa na ha na-eme egwuregwu, ngwa ngwa, ma ọ bụghị ha niile nwere ikike iwu - Jordan Pickford nwere ihe ndị ahụ nile.
N'ịmara na nhọrọ ndị nche nchebe amaola, ụlọ akwụkwọ ntorobịa na-achọ ịnye ya ego. Ha nwere mmetụta ọjọọ n'ihi afọ ndụ ya. Ha na-ala azụ iji zipu ya. Otú ọ dị, Pickford adịghị atụ egwu. Ọ gara ngụkọta ego isii. Ihe mgbazinye ego ndị a siri ike ma bụrụ ndị na-enweghị mgbagwoju anya ma nyere aka mee ka nwatakịrị ahụ ghọọ nwoke.
Pickford na ndị ezi mmadụ na-arụ ọrụ n'ebe ọ bụla ọ nọ na-enwe ọganihu site na nchebe nke ọgbọ dị iche iche. N'ụzọ dị iche, site na oge Pickford mere mmalite nke Sunderland ya enweela ihe karịrị 100 egwuregwu mbụ. "Mgbe ị na-ele ihe ndị na-amasị gị David James or David Seaman, ha bụ ụmụntakịrị na site n'oge ha bụ 20 ma ọ bụ 21, ha egwuri egwu dị ka egwuregwu 100, " ka Prudhoe, onye nkụzi ntorobịa nke Pickford kwuru.
Na 2011, Pickford bịanyere aka na ya na ụlọ ọrụ ya. N'ịga n'ihu n'ọrụ ya, a na-ejikarị ya eme ihe maka Phil Barnes, onye merụrụ ahụ. Ọ mụtara ikike pụrụ iche ị ga-eji na-edebe akwụkwọ ọcha.
Ihe ndekọ ederede dị ọcha kpaliri Everton bụ onye na 15th ụbọchị nke June 2017, bịanye aka na ya na nkwekọrịta afọ ise. Ego mbu nke ihe ruru £ 30 nde site na itinye on-ons, na-eme ka ọ bụrụ onye nlekọta mgbatị kacha atọ kachasị mkpa n'akụkọ ihe mere eme na onye na-eche nche nke Britain n'oge niile.
Jordan Pickford Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị agbanwe agbanwe -Ndụ mmekọrịta
Pickford na nwa obi ya bụ Megan Davison nọ na nwata kemgbe ha bụ 14, ya na ya kwaga Liverpool mgbe ọ banyere Everton.
Megan, bụ onye na-akọwa ya mgbe niile "Ọgba" na Instagram, onye nwoke na-anọchi anya. Ọ bụ mahadum nke gụsịrị akwụkwọ na klas nke abụọ dị elu. Ma ndị hụrụ ha n'anya na-aga ezumike n'oge nile n'ụwa, karịsịa Bahamas.
Jordan Pickford Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị agbanwe agbanwe -Ndụ nke Onye
Jordan Pickford nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike nke Jordan: Obi ọmịiko, nkà, ọgụgụ isi, dị nwayọọ, maara ihe, egwu
Omume nke Jordan: Egwu, ịtụkwasị ntụkwasị obi obi, mwute, ọchịchọ ịhapụ eziokwu, nwere ike ịbụ onye a mara ma ọ bụ onye nwụrụ anwụ
Gịnị Jordan chọrọ: Ịnọ naanị, ụra, egwu, mmekọrịta ịhụnanya, mgbasa ozi a na-ahụ anya, igwu mmiri, isiokwu ime mmụọ
Ihe Jordan achọghị: Ndị na-azọrọ na ha maara-ya-niile, na-akatọ, oge gara aga na-alọghachi na-ezute ya na obi ọjọọ nke ụdị ọ bụla
Jordan dị ezigbo enyi ma jupụtakwa ọṅụ na ịchị ọchị. N'ihi nke a, ọ na-ahụkarị onwe ya na ụlọ ọrụ dị iche iche. Jordan bụ onye na-enweghị ọdịmma onwe ya, ọ na-adị njikere mgbe nile inyere ndị ọzọ aka, n'atụghị anya inweta ihe ọ bụla.
Jordan Pickford Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị agbanwe agbanwe -Ndụ Ezinụlọ
Jordan Pickford sitere na ezinụlọ ndị dị n'etiti ndị Britain. Akụkọ ndị na-adịbeghị anya na-egosi na ezinụlọ ya sitere n'Eshia, n'ihi ya, ihe kpatara aha ahụ bụ Lee.
Jọdan ahọrọwo ọkụkọ na pasta nke nne ya kwadebere. Otu n'ime ncheta kachasị mma nke ezinụlọ ya na-agụnye ịnọ na azụ nke ugbo nne na nna ya, na-aga n'ebe ndị na-abụghị Njikọ, na otu nri (Chicken na Pasta) dị n'ihu ya. N'okwu ya ...
'Aga m aga Alfreton maka egwuregwu, papa m, Lee, ga-ebugharị, ' ka Pickford na-ekwu.
Ọ gara n'ihu ... 'M ga-eri nri m ga-eri na azụ. Mama m na-eme ka ọkụkọ na onyinye na ọ ga-ejide ya na tub. Amaghị m na ọ bụ ọkachamara ma ọ bụrụhaala na enwere m nwoke nke egwuregwu, ọ dị mma!. Ihe dị iche nye m na Saturday. Nne m, Sue, ga-akpọrọ m ọzụzụ na tagzi mgbe m bụ nwata. Nke a na-eme mgbe papa m bụ onye wuru ụlọ, ga-arụ ọrụ na ụtụtụ Saturday. "
Nwanna: Nwanne ya, Richard Pickford bụ onye mere ka ọ nọrọ n'okporo ụzọ ịghọ onye na-eche nche. Ha abụọ na-egwuri egwu mgbe ha bụ ụmụaka. O di nwute, Richard amaghi ya. Ahụmahụ ọjọọ ya na egwuregwu ọkachamara enyerela aka ịmalite mkpebi nwa nwanne ya nke tọrọ ya iji mezuo ọchịchọ ya site na ịrịgo elu ma na-eme ka onye nchịkwa England Gareth Southgate mara ya.
Jordan Pickford Ụmụaka Akụkọ Gụnyere akụkọ na-adịghị agbanwe agbanwe -Ndị nne na nna Kpọọ elu bụ mkpu
Mgbe Pickford nabatara na ndị agha ahụ mgbe Burnley si Tom Heaton merụrụ ahụ mgbe ọ na-enweta ọzụzụ tupu enwere ọzụzụ na World Slovenia na Slovenia. Nke a mere ka nrọ ya bụ England Kpọọ.
Ihe ndekọ akụkọ Pickford banyere akụkọ ahụ bụ nke a; "Naanị m na-adọta n'ime mama m na papa m mgbe a gwara m na ekwentị, 'A kpọwo gị, gbadaa ozugbo o kwere omume'. Anọ m akụ. M kwuru, sị, 'Mam, ana m aga England, Ana m aga ugbu a, naanị m nwere fon ekwentị'.
"Ọ gara, 'Mba na i nweghi' - o chere na m na-agba ya ume, na ọ bụ onye ọzọ! Ọ bụ nanị oge dị mkpirikpi ma ịhapụ abalị abụọ ahụ na ndị ọrụ kacha mma na mba ahụ bụ ahụmịhe mmụta. "
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị na Jordan Pickford. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịdị mma. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.